I-Kodi 18.4 ngoku iyafumaneka, yazi ukuphuculwa kwayo | Ubunlog
Inguqulelo entsha yeRhafu «Leia» 18.4 iyafumaneka kwaye ithathe indawo yenguqulo ye-18.3 kwaye kukuba abaphuhlisi beRhafu babonakala belandela ishedyuli okoko iinguqulelo zamva nje zibonisiwe emva kweenyanga ezimbini.
Kulabo abangazi Kodi Kuya kufuneka uyazi ukuba yayisaziwa njengeXBMC, iRhafu kunyeIziko lesoftware elivulelekileyo nelivulekileyoo (GPL) ophumelele amabhaso okudlala iividiyo, umculo, imifanekiso, imidlalo kunye nokunye. Ivumela abasebenzisi ukuba badlale kwaye bajonge uninzi lweevidiyo, umculo, iipodcast kunye nezinye iifayile zemithombo yeendaba zedijithali ezivela kwimithombo yeendaba yendawo kunye nenethiwekhi kunye ne-intanethi, kubandakanya iinkqubo zeTV, iPVR kunye neTV ebukhoma.
Eli ziko leendaba linobume obunokwenzeka kunye nokukhetha ukudlala okucocekileyo. Inazo neeplagi, izikhumba, inkxaso ye-UPnP, ujongano lwewebhu, inkxaso yolawulo kude, nokunye okuninzi.
Iprojekthi yeRhafu ilawulwa yi-XBMC Foundation engenzi nzuzo kwaye iphuhliswe ngamavolontiya abekwe kwihlabathi liphela.
I-Kodi isebenza kwi-Linux, i-MacOS, iWindows, i-iOS kunye ne-Android, kunye ne-10-foot user interface kunye neethelevishini kunye neempendulo.
1 Kodi 18.4 iindaba eziphambili
2 I-19 Matrix kuphuhliso
3 Uyifaka njani i-Kodi kwi-Ubuntu nakwiziphumo?
Kodi 18.4 iindaba eziphambili
Kule nguqulo intsha yeRhafu 18.4, kwakhona, abaphuhlisi ikakhulu bajolise kulungiso lwebug. Oku kulungisa "ujongano", "Ukudlala kwakhona / isikrini", "i-PVR" kunye "nezinye" iimpazamo.
Okokuqala, Ngaba uphucule ujongano lwayo ukulungisa isicatshulwa esilahlekileyo xa usayalela ii-addons kunye nokuvumela ukukhetha ithebhu efanelekileyo xa ubuyela kwiimenyu zayo.
Kwisikhumba sakho, ngokungagqibekanga okubizwa I-Estuary ilungelelanise imowudi yokubonisa xa ujonga iifoto kunye nobude bokubhaliweyo kunomathotholo. Ngaphandle koko en ividiyo eyongeza isiqendu kunye nefomathi yexesha zilungisiwe.
Ngokumalunga nokuveliswa kwakhona komxholo wemultimedia, I-18.4 Leia iphucule zombini uluhlu lokudlalwayo kunye noluhlu oluluhlu kwaye ikwaphucule i-FFmpeg kuhlobo lwe-4.0.4, kodwa le nguqulo ayikubandakanyi ukumiselwa kwe-AV1 esele ibandakanyiwe kuhlobo 4.2.
Ibug kwimiboniso yesilayidi nayo yalungiswa. Kukho izilungiso ezininzi zegciwane kwimisebenzi yokudlala, kubandakanya ukuvuza kwememori. Yonke ingcaciso eneenkcukacha malunga nokulungiswa kwe-bug inokufumaneka apha kwi-Github.
I-Kodi 18.4 Leia ikwabandakanya inani lezinto ezincinci zokuphucula:
Uyakwazi ukunikezela ngokuthe ngqo X 11
Qalisa ukudlala ividiyo kwifomathi yeTS
Ukulungiswa kwememori evuzayo
Ukuhamba kwesandi seDolby TrueH kuyenziwa
Sebenzisa iindlela ezigqibeleleyo ngokudibeneyo nemikhosi kwii-URLs
Lungisa ngamaxesha efayile yeefowuni ze-vfs
Lungisa + usayine ifolda ye-HTTP
Inkqubo yeSetyhula yeCache yeFayile iqala kunye nokupheliswa
Cima iinkcukacha zomjelo xa ulwazi lwevidiyo luhlaziywa
I-PlayMedia eyakhelweyo eyakhelweyo kuluhlu lwadlalwayo kunye nohlu lwadlalwayo oluqinisekileyo (umculo)
Layisha inkqubo yepropathi ngaphandle kokusebenzisa i-streaminfo (ividiyo)
Lungisa i-AVD3D11VACUkuqaliswa kwesakhelo somxholo (ividiyo, iWindows)
Indawo emiselweyo yesishwankathelo ehambelana ne-PR16314 (ividiyo)
Imemori ehleliweyo evuzayo, ulwaphulo lwecandelo eliqingqiweyo (ividiyo, iLinux)
Lungisa iPAPlayer yokuphatha utshintsho kwi-TrueHD (iaudiyo)
I-19 Matrix kuphuhliso
Okokugqibela, nathi sithatha ithuba lokuyichaza loo nto Abaphuhlisi bakwasebenza ngokufanayo kuphuhliso lwe-Kodi 19.
Apho udibaniso olutsha luvela phantse yonke imihla "Ngobusuku", oko kukuthi, iinguqulelo zokuqala ezinokuvavanywa ngabasebenzisi bokuvavanya. Kwiphepha lokukhuphela iRhafu, unokuzikhuphelela ezi nguqulelo kwiithebhu "zoPhuculo" phantse kuwo onke amaqonga.
Uyifaka njani i-Kodi kwi-Ubuntu nakwiziphumo?
Ngaba ihanjiswa ngokusasazwa kweephakeji kwiwebhusayithi yayo esemthethweni, kodwa kwimeko yoBuntu sinendawo yokugcina esemthethweni esinokuyisebenzisa ukufaka eli ziko lokuzonwabisa kwikhompyuter yethu.
Kule nto Kuya kufuneka sivule i-terminal kwaye senze le miyalelo ilandelayo.
Kuqala kufuneka songeze indawo yokugcina iRhafu kwinkqubo:
Sazisa inkqubo ukuba yongeze indawo yokugcina entsha:
Kwaye ekugqibeleni sifaka isicelo ngalo myalelo:
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » software » isiNxulumanisi » I-Kodi 18.4 ngoku iyafumaneka, yazi uphuculo lwayo
Isikhangeli sewebhu seMicrosoft Edge siceba ukubetha iLinux